I-Apple itshintsha ibhetri ye-MacBook Pros ukusuka phakathi ku-2012 kunye nasekuqaleni kuka-2013 | Ndisuka mac
I-Apple ithathe indawo yebhetri kwezinye iiMacBook Pros ukusuka phakathi ku-2012 nasekuqaleni kuka-2013
Ukuba une-15-intshi iMacBook Pro kwaye le Mac ibhalwe phakathi ku-2012 nasekuqaleni kuka-2013, ikhompyuter yakho inokuba kuluhlu luka-Apple lokutshintsha ibhetri. Ewe kuya kufuneka ulinde malunga nenyanga. Oku ubuncinci kwenzeka e-US, UK, Canada nase Australia, apho I-Apple ikubuza kangangenyanga ukuba ufumane indawo yebhetri yakho kwaye ukuba ungalinda eli xesha, yitshintshe ngaphandle kwendleko. Olu khetho luyaziwa ngabasebenzi beApple, ekufuneka bacebise ngolu lungiso ngaphandle kweendleko.
Kwakweli phepha linye, siphawule ukuba iApple ibisenza isenzo esifanayo phakathi kuka-Matshi 2 noJulayi 25 walo nyaka. Ngelo thuba, abanye abasebenzisi beza kuqinisekisa, kuba babengenayo indawo esecaleni kwebhetri, ngexesha elifanelekileyo, UApple ucebise ukuba utshintshe ikhompyuter nge-2016 MacBook Pro ngeTouch Bar. Uninzi lwenu lwenze uvavanyo kwiVenkile yeApple yaseSpain, kodwa kwiimeko ezininzi babenento eyimfuneko kwaye ukubuyiselwa kwezixhobo akwenzekanga. Enkosi nangayiphi na imeko, ngokwabelana namava akho nathi.
Ngesi sihlandlo, iApple iqalile iphulo elitsha ukusukela nge-25 ka-Agasti ophelileyo, ubuncinci e-US Injongo yakho kukuqhubeka nokubuyisela iibhetri kwezi zixhobo zikhankanywe ngasentla. Indlela yokujonga ukuba izixhobo zakho zifuna ukutshintshwa kukufumana olu lwazi lulandelayo:
Cofa kwi apile.
Khetha: Malunga nale Mac.
Amandla (ngaphakathi kweHardware)
Umqathango: kufuneka ubeke: Inkonzo yebhetri okanye ibhetri yenkonzo.
Ukuba awukwazi ukulinda ukutshintshwa okanye ufuna ukutshintsha ibhetri, kuba imodeli yakho ayichaphazeleki, iApple ikunika inkonzo ekhawulezayo. Ukutshintshwa kwebhetri kuphakathi kwe- $ 200 kunye ne- $ 290, ngokwemithombo ekuboniswene nayo kumazwe ahlukeneyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ithathe indawo yebhetri kwezinye iiMacBook Pros ukusuka phakathi ku-2012 nasekuqaleni kuka-2013
URicardo Mantero sitsho
Ndinayo kanye le ngxaki kwi-mac yam yokuqala ka-2013. Yeyiphi inkqubo ekufuneka ndiyilandele ukusuka eSpain? Ngaba likho iphepha lokulixela?
Phendula uRicardo Mantero
Ewe, bendithetha nje ngeNkxaso yeNkxaso yeApple kwaye bandixelele ukuba ewe, ibhetri yam yonakele kodwa abanayo nayiphi na inkqubo yokubuyisela ityala lam. Intlahla embi. Makhe sibone ukuba ifika eSpain kamva.
Ingcwaba Raider yeMac: qala iveki ngumoya onomdla
I-AirAttack 2, isimahla ixesha elilinganiselweyo